Gini bu akara nke Oriri Nsọ? ihe ha pụtara? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Mina Del Nunzio - Machị 4, 2021
Gịnị bụ akara nke'Oriri Nsọ? gịnị ka ha pụtara? Oriri Nsọ bụ isi mmalite ndụ ndị Kraịst. Gịnị ka akara ngosi a nọchiri anya ya? ka anyị chọpụta ọnụ ihe akara ndị a zoro n'azụ Oriri Nsọ. N'oge ememe nke Mas dị Nsọ a na-akpọ anyị òkù isonye na tebụl Onyenwe anyị.
Onye nchụàjà ọ na-enye anyị ndị ọbịa n'oge ahụ nke Oriri Nsọ ma ọ dịtụla mgbe anyị na-eche ihe kpatara ya? Ọka wit ọ bụ ọka, a na-etinye mkpụrụ ya ka ha bụrụ ntụ ọka ma jiri ya mee ihe dị ka achịcha kachasị mkpa, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo: Jesus ọ bụ achịcha nke ndụ. Mgbe ụfọdụ, otu ntị ọka na-anọchi anya ọka wit, oge ndị ọzọ site na ujo ma ọ bụ ùkwù ọka wit, ụyọkọ nke ịkpụ ahịhịa jikọtara ọnụ na ngwugwu.
Achịcha ọ bụ nri bụ isi nke ndụ nkịtị na achịcha nke Eucharist bụ nri siri ike nke ndụ ime mmụọ. Na Nri Anyasị Ikpeazụ, Jizọs weere otu ogbe achịcha na-ekoghị eko wee sị: “Nara, rie, nka bu arum” (Mt 26:26; Mk 14:22; Lk 22:19). Achịcha ahụ e doro nsọ bụ Jizọs n’onwe ya, ezigbo ọnụnọ nke Kraịst. Nkata achicha. Mgbe Jizọs nyere puku mmadụ ise nri, ọ malitere iji nkata achịcha ise (Mat 14:17; Mak 6:38; Lk 9:13; Jọn 6: 9), na mgbe o nyere puku mmadụ anọ nri, ọ malitere na nkata asaa (Mt 15: 34; Mak 8: 6). Achịcha na azụ ha abụọ so na ọrụ ebube Oriri Nsọ Jizọs (Mt. 14:17; 15:34; Mkp 6:38; 8: 6,7; Lk 9:13; Jn 6: 9), ha sokwa na ndị nke Oriri Nsọ Oriri Nsọ nke Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya mgbe mbilite n'ọnwụ gasị (Jn 21,9: XNUMX).
Gini bu akara nke Oriri Nsọ na onye nwe ulo?
Gini bu akara nke Oriri Nsọ? na nke onye nnabata? Onye nnabata ọ bụ ihe nnọchianya nke Oriri Nsọ, achịcha na-ekoghị eko nke eji aha nsọ na nkesa na Mas. Okwu a na - enweta site na okwu Latịn hostia , atụrụ ebule. Jizọs bụ "Nwa Atụrụ Chineke nke na-ewepụ mmehie nke ụwa "(Jn 1, 29,36), na aru ya, nke enyere n’elu ebe nchu aja nke obe, ka enyere ayi site n’iru nke Mass. Mkpụrụ vaịn na Mmanya: a na-apị mkpụrụ vaịn n'ime ihe ọ juiceụ juiceụ, mmiri mmiri ahụ gbanwere n'ime mmanya na mmanya Jizọs ji mee ihe na Nri Anyasị Ikpeazụ na-anọchite anya Ọbara ya, ọbara nke ọgbụgba ndụ ahụ, wụsara maka ihu ọma nke mgbaghara nke mmehie (Mt 26: 28; Mk 14:24; Lk 22:20).
Chalice: Jizọs ji iko ma ọ bụ chalice dịka arịa maka ọbara ya na Nri Anyasị Ikpeazụ. Ogwu na umu ya: ụmụ ọkụkọ nke nne okwo na-anwụ n'ihi ụkọ nri, ọ na-adanye ya ara ka o jiri ọbara nke ya zụọ ụmụ ya. N’otu aka ahu, eturu obi Jisos n’elu obe (Jon 19, 34), obara obara bu ezi ihe onunu, onye obula nke nu obara ya nenwe ndu ebighebi (Jn 6: 54,55).Ebe tarchụàjà bụ ebe Eucharistic Àjà na akara nke Oriri Nsọ n'onwe ya.